China Nano kuzvichenesa aruminiyamu epurasitiki ndiro fekitari uye bhizimisi | Jixiang
Pane hwaro hwekuita kwakanakira kwetsika fluorocarbon aluminium-epurasitiki pani, iyo yepamusorosoro nano yekumhanyisa tekinoroji inoiswa kukwidzirisa mashandiro ekuita senge kusvibiswa uye kuzvichenesa pachako. Iyo inokodzera machira emadziro ekushongedza ane akakwirira anodikanwa ebhodhi pamusoro pekuchenesa uye anogona kuramba akanaka kwenguva refu.
Iko pamusoro pe nano fluorocarbon aluminium epurasitiki ndiro yekunamatira ine yakanakisa yekuzvichenesa-basa. Kazhinji, iyo aluminium-epurasitiki keteni remadziro pani ichave yakasvibiswa nekuda kweguruva uye kunaya mushure mekushandisa kwenguva yakati, kunyanya iyo silicone sealant ine isina kuomarara mhando vimbiso inoshandiswa mune mamwe mapurojekiti, mushure menguva refu yekunyudzwa kwemvura inonaya, yakawanda nhamba yemavara matema inoyerera ichibuda kubva mumajoini, ayo asingori chete anowedzera nguva dzekuchenesa, asi zvakare zvinokanganisa kutaridzika kwemadziro. Nekuda kwekumanikidza kwepasirese kwepasi kweiyo kupfeka pachako, iro banga rinonetsa kutevedzera. Tsvina shoma inogona kubviswa mushure mekugezwa nemvura inonaya, iyo inogona kuzadzikisa mhedzisiro yekuzvichenesa. Inogona kusevha yakawanda yekuchenesa uye yekugadzirisa mitengo yevaridzi.
1. Mvura yekuchengetedza mabhenefiti: kuchenesa madziro kunochengetedza yakawanda mvura zviwanikwa;
2. Kubatsira kukuru kwesimba rekuchengetedza: iyo TiO2 yeOker nano yekuzvichenesa-inodzivirira kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye mwenje wezuva ultraviolet mwenje haingoderedze kusvibiswa kwechiedza chete, asi zvakare inovharira 15% yesimba rezuva rese kupinda mukamuri, uye kudzora kushandiswa kwesimba, ichiita kuti itonhore uye igare zvakanaka.
3. Kuchenesa mweya: 10000 mativi emamirita ekuzvichenesa-wega yakaenzana nemhepo yekuchenesa mhedzisiro yemapoplar miti mazana maviri. Nano-TiO2 haigone kuora zvisizvo zvisikwa, asi zvakare ine yakasimba antibacterial uye bactericidal kugona, iyo inogona kutora chinzvimbo chakanaka munzvimbo yekuchenesa mweya uye nekuvandudza mhando yemamiriro ekunze.
4.Deredza pasi kuchembera nekutsakatika kwemavara substrate: OKer nano-TiO2 yekuzvichenesa yekuzvichenesa inodzivirira iko kuita kweiyo ultraviolet mwaranzi pane substrate, inononoka kudzora kupera kwemavara eruvara senge machira emaketeni nemabhiridha mune chezuva, uye hazvisi nyore kuchembera kwenguva yakareba, kuti uwane mukana wekuwedzera kuchena uye hupenyu.
Inonyanya kushandiswa mumaketeni masvingo ezvivakwa zvepamusoro-grade, mahotera nyeredzi, nzvimbo dzekuratidzira, nhandare, magasi epasi uye dzimwe nzvimbo dzine zvinodikanwa zvakanyanya pakusvibiswa kwemhepo.
Pashure: Fireproof aruminiyamu epurasitiki ndiro
Zvadaro: Ruvara fluorocarbon aluminium epurasitiki ndiro